Nepalistudio » अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठका नेपथ्यका प्रेमी : वास्तविकता यस्तो पो !
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठका नेपथ्यका प्रेमी : वास्तविकता यस्तो पो !
जीवनका उतारचढाव र गोप्यता बजारीकरण भएपछि अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठबारेको आमधारणामा केही परिवर्तन आयो । त्यहि धारणासँग लड्दालड्दै उनी डिप्रेशनमा पनि पुगिन् । तर, जीवनसँग संघर्ष गर्ने विषयमा उनी नडराएको एउटा अन्तरवार्तामा भनेकै छिन् ।
उनको जीवन अहिले चलायमान छ । खुशीका रङ्हरूले इन्द्रेणीको प्रारूप पनि लिँदैछन् । नेपाली फिल्म उद्योगमा छनौट गरेर अभिनयको कसीमा उत्रिने नम्रताको रिल जीवनको परिचर्चा अहिले बजारमा भइरहेकै छ । तर, उनको रियल जीवन पनि फरक ढंगले अघि बढिरहेको छ, नेपथ्यमा रहन मन पराउने प्रेमीका कारण ।
मंसिरको कठ्यांग्रिदो जाडोमा ‘प्रसाद’ प्रिमियरमा सिटी सेन्टर पुगेकी अभिनेत्री नम्रता ‘हट’ लुुक्समा देखिइन् । उनले फिल्मबारे केही बोलिनन् तर क्यामेराका लागि भने पोज–पोजका तस्बिर दिइन् । एउटा होइन अनेक तस्बिरमा उनी झुल्किइन् । निर्माता, निर्देशक र अन्य कलाकारसँग तस्बिरमा रमाइरहेकी नम्रतालाई नेपथ्यबाट नियाँलिरहेका थिए उनका प्रेमी दावा स्टिभेन शेर्पा ।
यो जोडी सामान्य हिसाबले मिडियामा त्यति देखिँदैन । एकजना फिल्मी पत्रकारले भने जोडीलाई नियाँले र उनीहरूको धारणा बुझ्ने कोशिश गरे । फिल्मी जीवन एकातिर र निजी जीवन अर्कातिर राख्न मन पराउँछिन् नम्रता । उस्तै छन् दावा पनि । तर, प्रेम प्रगाढ भएको साझा बक्तव्यमा पनि यो जोडी चुकेन ।
दावा भन्छन्,‘उनले १० माया गर्छिन् भने म ११ माया गर्छु । निजी जीवन भनेको बेग्लै हो, सार्वजनिक जीवन बेग्लै हुन्छ ।’ नम्रताले पनि निजी जीवनलाई मिडियामा ल्याउन मन नलागेका कारणले दावाबारेको जानकारी बाहिर नआएको बताइन् । दुवै ‘एकअर्काको समझदारी’ नै प्रेमको सफल सफर भएको ठान्छन् ।
दावाको एउटा दाबा पनि छ– उनीहरू दुवै जना एकअर्कालाई छाड्न सक्तैनन् । सम्बन्धमा कुनै शंका र उपशंका पनि छैन । त्यसमा नम्रताको समर्थन पनि थियो ।
आफ्ना प्रेमी बोकेर मिडियामा आउन अन्य अभिनेत्रीले हिचकिचाहट मानेका छैनन् । तर नम्रताका प्रेमी दावा मिडियामा आउन रुचाउँदैनन् । उनलाई फिल्मसँग पनि कुनै लगाव छैन । त्यसैले नक्सालमा एउटा विशाल रेष्टुुरेन्टमा नम्रतासँगको संयुक्त लगानी गरेका छन् ।
फिल्मीनगरीको गसिपका आधारमा दावा नम्रताका चौथो प्रेमी हुन् । तर यो जोडीको यात्रा सुरु लामै समय भइसकेको छ । खासगरी दावा हिमाल आरोही हुन् । ५ बर्षदेखि नम्रतासँगको प्रेमसम्बन्धमा छन् उनी । दावाले शिखर कञ्चनजंघाको सफल आरोहण गरे ।
उनीहरूको प्रेमको झंकार जब दावाले कञ्चनजंघा आरोहण सम्पन्न गरे त्यसपछि नम्रताको फेसबुकमा पनि देखिएको थियो ।
‘माई मेन मेकिङ वेभ्स अन द माउन्टेन, प्राउड अफ माई लभ’, उनले लेखेकी थिइन् । व्यावसाय र काममा आ–आफ्ना क्षेत्रमा सक्रिय रहेको दुवैको भनाई थियो । त्यसैले त हर्षित मुद्रामा दुवैको सम्बन्ध र व्यवस्तताबारे नम्रताले दावातिर देखाउँदै भनेकी छन्,‘उसलाई हिमाल चढ्दै फुर्सद छैन !